किन माफी मागे अमिरले रानीसँग ? यस्तो रहेछ कारण | Lifemandu
किन माफी मागे अमिरले रानीसँग ? यस्तो रहेछ कारण
| बुधबार, ९ फागुन, २०७४
मुम्बई – चर्चित अभिनेत्री रानी मुखर्जीले बलिउडमा ४ वर्षपछि कमब्याक गर्दैछिन्। २३ मार्चमा प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘हिच्की’मार्फत पुनरागमन गर्न लागेकी रानीले आफ्नो करियरको सुरुवाती संघर्षबारे बीबीसीसँग खुलेर बताएकी छन्।
रानीका अनुसार सुरुवाती दिनमा फिल्मकर्मीले उनको आवाजलाई पत्याएका थिएनन्। आज उनको आवाज चर्चित छ, तर सुरुवाती दिनमा उनको आवाज आदर्श अभिनेत्रीजस्तो पातलो नभएको भन्दै उनले सास्ती खेप्नुपरेको थियो।
फिल्म ‘गुलाम’को किस्सा सुनाउँदै रानीले आफूसँग आमिर खानले माफी मागेको पनि खुलासा गरिन्। फिल्म गुलामको अभिनेत्रीमा छानिएकी रानीको आवाज मोटो भएको र त्यो फिल्ममा नसुहाउने भन्दै प्रमुख अभिनेता आमिर खान, निर्देशक विक्रम भट्ट र निर्माता मुकेश भट्टले उनको भुमिकाका लागि आवाज डबिङ्ग गराएका थिए।
त्यसक्रममा गुलामसँगै करण जोहरको फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’मा काम गरिरहेकी रानीलाई करणले पहिलो फिल्ममै आवाज डबिङ्ग हुने भएपछि आफ्नो फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’मा वास्तविक आवाज राख्ने निर्णय सुनाए।
रानी भन्छिन– करण नयाँ निर्देशक थिए। उनी मेरो भुमिकाको आवाज कुनै अरुसँग डब गराउन सक्थें। तर उनले मलाई विश्वास गरे र मलाई तिम्रो आवाज तिम्रो आत्मा हो भने। उनको यो विश्वासले म मा आत्मविश्वास जगायो र हिम्मत बढायो।
उनका अनुसार करणले बलिउडकै सर्वाधिक हिट फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ मा उनको रियल आवाज राखे जुन निकै चर्चित भयो।
रानी अगाडि भन्छिन्, ‘कुछ कुछ होता है’ हेरेपछि आमिर खानले मलाई फोन गरेर म सँग माफी मागे। ‘मलाई विश्वास थिएन कि तिम्रो आवाज फिल्मका लागि उपयुक्त छ, तर फिल्म हेरेपछि मैले तिमीमाथि टिप्पणी गरेको आफ्नो शब्द फिर्ता लिन्छु। तिम्रो आवाज साँच्चिकै राम्रो छ’ भनेर मसँग पश्चताप गरे।
उसो त रानीले सुरुवाती दिनमा आवाज मात्रै होइन होचो भएको गुनासो पनि सुन्नुपर्यो। तर सौभाग्य नै भन्नुपर्छ यति हुँदा हुँदै पनि उनले सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खानजस्ता स्टार अभिनेतासँग काम गर्ने अवसर पाइन्।
उनी आफ्नो सफलता र ठूला निर्देशक, निर्माता, अभिनेता र प्राविधिकसँग काम गर्न पाएकोमा खुसी छिन्। भन्छिन– सफलता एकैपटक पाइँदैन्, सफलताले जीवनलाई पछ्याउँछ। निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ।
अकल्पनिय गल्ती गरेका लिभरपुलका गोलरक्षकले यसो भन्दै मागे माफी
यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको उपाधि लिभरपुलले जित्ने धेरैको आशा थियो । तर, लिभरपुलका गोलरक्षका दुई ठुला गल्तीका कारण रियल मड्रिडसँग लिभरपुल ३-१ गोलले पराजित हुन पुग्यो ।
स्टीभ स्मिथपछि डेविड वार्नरले पनि रुदैँ मागे माफि, स्वीकारे गल्ती
सिड्नी । ‘बल टेस्टिंग’ विवादमाथि अष्ट्रेलिया क्रिकेट टीमका पूर्व उप–कप्तान तथा ओपनर डेविड वार्नरले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन् । उनले गल्तीको जिम्मेवार आफू भएको स्वीकारर्दै माफी
विप्लव समहूले जबरजस्ती आर्थिक सहयोग मागे प्रहरीलाई खबर गर्नुस् : गृह
काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समहूलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ । गृहमन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती आर्थिक सहयोग मा